Barashada Baaskiil Fuulashada iyo Dhisida Software | Martech Zone
Barashada Baaskiil Fuulashada iyo Dhisida Software
Talaado, Maarso 27, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
Shaqadu waxay ahayd caqabad dhab ah dhawaanahan. Ahaanshaha Maareeye Badeecad waa shaqo soo jiidasho leh - marka aad dhab ahaan u hesho inaad qabato shaqadaas. Waan ogahay inay taasi tahay wax jilicsan oo la yiraahdo laakiin runtii waxaad tahay xarunta dhexe ee dagaalka socda ee iibka, Horumarinta, Adeegyada Macaamiisha iyo hoggaanka shirkadda.
Dadka qaar ayaa lumiya goobta xaqiiqda ah in ujeedku uusan ahayn in la dhiso astaamo badan ama arjiga xiga ee websaydhka 2.0 ah, ujeedku waa in lagu xoojiyo dadka inay shaqadooda u gutaan si wax ku ool ah, iyo si hufan. Maalin kasta waxaa la i weydiiyaa, "Waa maxay astaamaha ku jira sii deynta soo socota?"
Marar dhif ah ayaan ka jawaabaa su'aasha maxaa yeelay diiradeydu kuma eka astaamaha gabi ahaanba, diiradeydu waa inaan dhiso xal u suurta galiya suuqleyda inay shaqadooda u gutaan si hufan oo wax ku ool ah. Awood siinta macaamiishaadu waa waxa ay ku saabsan tahay. Haddii aad xoogga saarto waxyaabaha waaweyn iyo kuwa dhalaalaya, waxaad lahaan doontaa waxyaabo waaweyn oo dhalaalaya oo aan lahayn macaamiil isticmaasha.
Google dhisay boqortooyo ka bilaabanaysa hal sanduuq oo qoraal ah. Waxaan akhriyay qormooyinka qaar halka Yahoo! runti wuxuu ku dhaleeceeyay Google adeegsigooda. Maxaa kafiican ugudambeynta hal sanduuqa qoraalka? Ha igu qaldan, Yahoo! waxay ku dhistaa qaar ka mid ah astaamaha cajiibka ah barnaamijyadooda. Waxaan gabi ahaanba jeclahay adeegsigooda adeegsigooda, kaliya ma isticmaalo barnaamijyadooda.
Google wuxuu dadka baraa sida loo wado baaskiil, ka dibna waxay sii wadaan hagaajinta baaskiilka. Adoo ka samaynaya raadinta wax ku oolka ah hal sanduuqa qoraalka, Google wuxuu awood u siiyay boqolaal milyan oo qof inay shaqadooda si fiican u gutaan. Way shaqeysay, waana sababta qof waliba u adeegsado. Ma ahayn wax qurux badan, ma aysan laheyn bog qurux badan, laakiin waxay awood u siisay adeegsadayaashooda inay si hufan oo hufan ugu shaqeeyaan.
Miyaad qiyaasi kartaa inaad 4 sano jir ku saareyso baaskiil 15-xawaare sare leh oo leh muraayadaha indhaha gadaal, calaamadaha, weelka biyaha, iwm. Ma yeeli lahayd Marka maxaad u dooneysaa inaad dhisto barnaamij software ah oo leh 15-xawaare, muraayadaha, calaamadaha iyo weelka biyaha? Waa inaadan Ujeeddada ayaa ah in la baro inay raacaan baaskiillada si ay uga heli karaan dhibic A illaa dhibic B. Markay Point A ilaa Point B ku adkaato kakanaanta, waa marka aad u baahan tahay baaskiil leh shaqooyin cusub oo taageeraya. Laakiin kaliya marka isticmaalaha uu si dhab ah u fuuli karo!
Taasi waxay ka dhigan tahay giraangiraha tababarka waa weyn yihiin (waxaan ku aragnaa qaabka saaxirrada). Mar haddii isticmaalehu dhab ahaantii raaci karo baaskiilka, markaa waad iska saari kartaa giraangiraha tababarka. Markuu adeegsaduhu ku fiicnaado raacitaanka baaskiilka oo uu u baahan yahay inuu si dhakhso leh u kaxeeyo, ka dibna xoogaa qalab dhigo. Marka isticmaaluhu u baahan yahay inuu ka baxo wadada, ku diyaari Baaskiil Baaskiil. Markuu isticmaaleyaashu ku dhufan doono taraafikada, ku dhex tuur muraayad. Iyo raacidaa dheer, ku tuur weelka biyaha.
Google waxay tan ku sameysaa sii deynta sii kordheysa iyo horumarka joogtada ah ee barnaamijyadooda. Waan jeclahay xaqiiqda ah inay igu xiraan wax fudud ka dibna ay sii wadaan inay ku daraan. Waxay ku bilaabeen sanduuq qoraal ah, ka dibna waxay ku dareen waxyaabo kale sida sawirka raadinta, raadinta baloogga, raadinta koodhka, bogga Hoyga Google, Google docs, Spreadsheets Google… Markii aan caadaystay adeegsiga barnaamijyadooda, way sii wadeen inay horumariyaan inay taageerto habab dheeri ah oo iga dhigaya inaan shaqadayda u qabsado si wax ku ool ah oo waxtar leh.
Baaskiilku waa waxa qofka ka helaya dhibic A ilaa dhibic B. Dhis baaskiil weyn oo sahlan in la raaco, marka hore. Marka ay bartaan sida loo wado mootada, ka dibna ka walwasho sida loo taageero habab dheeri ah adoo dhisaya shaqeynta cusub ee dalabkaaga.
Xusuusnow - Google wuxuu ku bilaabay sanduuqa qoraalka oo fudud. Waxaan kugula tartami lahaa inaad eegto codsiyada sida ugu dhakhsaha badan u koraya iyo ganacsiyada guuleysta ee shabakadda waxaadna ka heli doontaa hal dabeecad oo u gaar ah dhammaantood… way fududahay in la isticmaalo.
U shaqo tag shaqo Off
Wargeysyada Ma Dhiman, Iibinta Wararka Waa Dhintay
Boostada cajiibka ah! Gaar ahaan jeclaa isku ekaysiinta.
Waxaan u maleynayaa waxa maareeyayaasha badeecaddu ay ku adag tahay maalmahan inay si sax ah u qeexayaan goorta ay tahay waqtiga saxda ah ee dheeriga ah ee astaamaha "baaskiil" iyo sida loogu xidho astaamaha hore u jiray ee adeegsadayaashoodu caadaysteen.
Post weyn Doug. Waxyaabo badan oo umuuqda kuwa qabow runti shaqada uunbaa ku adkeynaya. Ma aragtay buugga "Maxaa Sabab u ah Nuugista Software" ama "Ku Riyoodka Xeerka"?
Labaduba waxay kahadlaan sida softiweerku u burbursan yahay isagoo isku dayaya inuu noqdo mid qabow ama mid aad u jilicsan oo iska hor imanaya oo kaliya shaqada si fudud loo qabtay
Mahadsanid, Chris! Waxaan casharkan kugu leeyahay qaab. Waad dhistay Xaqiiqda mabda'a dhismaha software isticmaalayaasha iyo si fudud xalinta dhibaatada. Ma sugi karo inaan arko waxa aad ku kaydiso shirkaddaada xigta, Isku-darka!